Concert Album | U.N.O.B
Here are the some pics from concert, really cool and thanks to Ko Myat Soe (Photographer). if someone needed to contact him for the pics, his email address is ( mmtsoe@yahoo.com).
အချင်းချင်းဆွေးနွေးရန်၊ အကြံဥာဏ်များပေးရန်အတွက် Comment Section ကိုထားရှိခြင်းဖြစ်ပါသည်။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး အပြန်အလှန် လေးစားခြင်းအားဖြင့် အပြုသဘောဆောင်သော Comment များကိုသာရေးသားကြပါရန် အကြံပြုလိုပါသည်။ ယခု Website တွင်လာရောက်လည်ပတ်လျက်ရှိနေသော လူကြီးမင်းသည် စာရေးတတ်၊ ဖတ်တတ်သည့် အသက်အရွယ်ရှိနေပြီ ဖြစ်ပါသောကြောင့် မိမိရေးသော Comment များသည် မိမိတာဝန်သာဖြစ်ပါသည်။ ဤ Website (unobusa.org) ဖြင့် လုံးဝ မသက်ဆိုင်ပါကြောင်း ကြိုတင်အသိပေးလိုပါသည်။
About the Author: koo
MDY September 24, 2009 at 4:09 pm Reply
All the pictures are perfect……Thankssssssss…camera crews.
Lynn September 23, 2009 at 6:58 pm Reply
good pictures…Well done you. Marvellous !!
latt September 23, 2009 at 4:09 pm Reply
Really nice pictures, I love to have some of ’em.
mbs September 23, 2009 at 8:38 am Reply
Very nice pictures. Thanks Saya Myat Soe.